Ikhaya lelizwe laseWalton kwiihektare ezi-5
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRiel
Kufuphi neendawo ezininzi zokuchithela i-ski kwaye zijikelezwe ziintaba kunye neehektare ezi-5 zengca kunye neenkuni, ikhaya lethu lixesha lokuphumla eliqinisekisiweyo. Izilwanyana zasendle ziyakubulisa ngelixa ilanga liphuma phezu kwentaba. Yonwabela ukosiwa kwirhasi okanye phezu kwamalahle ekhitshini elingaphandle. Khanyisa umlilo wangaphandle kwidesika kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Dlala umngxuma wombona okanye isileyi phantsi kwengca yethu enkulu. I-Antiquing edolophini, ichibi lokuqubha lasimahla lasehlotyeni, ukutyibilika kunye nokuhamba intaba, kunye nezinye iindawo ezininzi zonyaka.
Ipropathi ibucala ngokupheleleyo kwaye ngelixa ubona izindlu zikude, izolile kwaye izolile. Isibhakabhaka sasebusuku asinakoyiswa.
Eli likhaya elisebenza ngelanga elineempawu ezikhethekileyo zokuyigcina ipholile ehlotyeni kwaye ishushu ebusika. Izifudumezi ze-baseboard zinceda ngobushushu, kodwa izitovu ezimbini zokhuni zenza umsebenzi onzima wokuphakamisa ubushushu obutofotofo. Ukhuni luyafumaneka kunikezelo lwethu.
Igumbi labantwana line-legos kunye nezixhobo zobugcisa, kunye neencwadi ezininzi ngababhali abathandayo, kwi-8-12 yeminyaka ubudala.
I-Intanethi inokuphatha abantu abaninzi ngokusasaza okanye kwinkomfa yevidiyo ngexesha.
Ikhaya lethu linegumbi lokuhlambela elinye kuphela esinokwabelana ngalo (ngokugungxulwa kancinci, kufanele ukuba kube njalo kodwa kuyababhida abantu!)
Xa sisendlini sinekati yethu kunye nathi. Indlu icocwe ngokucokisekileyo kodwa kulungile ukwazi kubantu abaxhalabileyo malunga nokungalungelani komzimba nezinto ezithile.
I-spinner endala kodwa enkulu iyafumaneka, kunye neemayile zokubaleka kunye nokuhamba ngebhayisekile ngeenxa zonke, kubandakanya ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela zokuhamba ngeenyawo ekuqhubeni umgama.n
Umbuki zindwendwe ngu- Riel
Ndiza kufumaneka ngefowuni okanye ngetekisi ngexesha lokuhlala kwakho kwaye kuya kuba lula ukufikelela.
Ndizakuthumelela incwadi ebanzi enengcebiso yokusebenza kwendlu, kunye neengcebiso zezinto omawuzenze.